प्रधानमन्त्री लाइ जिउदै श्रञ्द्धाञ्जली दीए यी अन्लाईन मीडीयाले हेर्नुस::TINAUKHABAR
मृत्यु सत्य हो तर जिउँदै मृत्युको कामना गर्नु कति उचित होला ! जीवनको सुरुआती जन्म हो र मान्छेले जन्मदा जीवनको एउटा कोरा कागजमा मृत्युको पनि सहिछाप लगाई सकेको हुन्छ । मान्छेको जीवन यात्रामा घामछायाँ दुबै हुन्छन् । उज्यालो र अँध्यारो पक्ष पनि हुन्छन् । जीवन नाफाघाटाको हिसावमात्र पनि होइन बरु यो सफलता र असफलताको सिंढी हो ।
जीवनको म्याराथनमा को कहिले कसरी जीतको पोल छुन पुग्छ त्यो त समयको गतिशीलताले देखाउँछ । जीवन सोचे जस्तो पनि त छैन । अनेक वाधा व्यवधानको काँडालाई हटाएर गन्तव्यमा पुग्नु त्यति सजिलो भने छैन । प्रसंग देशको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीसंग जोडिन्छ । उनलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने भन्ने कुराको पक्षबाट नै सुरुआत् हुन सक्छ । अहिले उनी अस्पतालको बेडमा स्वास्थोपचार गराइ रहेका छन् । उनका बारेमा फेसबुकका वालहरुमा अनेक तर्कविर्तकहरु आइ रहेका छन् ।
फेसबुकका वाल आफ्ना विचार राख्ने गतिलो स्रोत र स्थान हुन सक्छ तर त्यसको दूरगामी प्रभाव र असरभन्दा पनि वर्तमानले के सरोकार राख्छ भन्ने नै मुख्य हो । उनको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने बेला यही नै हो त ? उनलाई गाली गर्ने वा आशीर्वाद दिने बेला यही हो ? उनका बारेमा आज फेसबुकमा अनेक कुराहरु लेखिएका छन् जो पढ्न पनि बेकार लाग्छन् । विरामी भएको हुँदा कतिले उनलाई श्रद्धाञ्जली समेत दिइ सकेका छन् । के उनलाई विरामी भएको हुँदा दिने सान्त्वना यही हो ?
देशको विषम परिस्थितिमा उनी २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनले नाकाबन्दीमा देशप्रति देखाएको अदम्य शाहस पानीका फोका थिए र ? आम नागरिकबाट हाईहाई पाएका प्रम ओली आजै कुहिएका साग भए जो गन्हाइ सके ? बामपन्थीहरुको एकता गर्ने,चाइनासंग पारवहन सम्झौता गर्ने र चाइनासंग साइनो बढाउनु कसैका नजरमा राम्रो कदम नहोला । तरपनि उनी आफू आम नागरिकसंग कति इमान्दार वा वेइमान छन् भन्ने कुरा उनी सञ्चो भएर आइ सकेपछि छलफल गर्दा जाती नै हुने छ ।
जो होचो उही माथि घोचो भनेको जस्तै भो अर्थात उनी अशक्त भएर अस्पतालको बेडमा पल्टि रहँदा उनीमाथि अनेक किसिमका लाञ्छना लाउनु कति उचित होला ? उसै त मिर्गौला फेरेको मान्छे । पटक पटक संक्रमण भइ रहने र मिर्गौलाको अवस्थाबारे रिचेकअप गरिरहनु उनको दैनिकी पनि हो ।
मान्छेको नूनपानीको शरीर हो,आज उनलाई बेडमा उपचार गरिरहँदा गाली गर्ने मित्र कहिल्यै आफू बिरामी हुने छैनन् ? कहिल्यै ओखती खानु पर्ने छैन र कहिले अस्पतालको बेडमा उपचार गराउनु पर्ने छैन ? के फलामको शरीर हो ? फलाममा नि खिया लाग्छ भने मान्छेको शरीरमा अनेक व्यवधान आउनु खासै ठूलो कुरो होइन ।
हुन त झिंगाको रीसले डिंगा मर्दैन भनिन्छ । कसैले प्रम ओलीलाई गाली गर्दैमा,श्राप दिदैैंमा र मृत्यु अघिनै श्रञ्द्धाजली दिदैंमा भौतिक शरीरलाई खासै फरक नपर्ला तर त्यसले के कुराको संकेत गर्दछ भने हामी नेपालीहरुको मनोग्रन्थी वा मनोदशा कस्तो छ भन्ने कुरोका हेक्का दिल्याउन सहयोग पुराउँछ ।
होलान् उनका गल्ती । मान्छेका गल्ती नहुने भन्ने हुँदैन । गल्ती दोहोराउन हुँदैन । गल्तीलाई सच्चाउनु महानता हो । प्रम ओलीका गल्ती खोतल्ने बेला यही हो त उसो भए ? उनलाई गाली गर्ने बेला यही हो त ? उनलाई तथानाम वेइज्जत गर्ने समय यही हो त ? उनलाई जे भने पनि हुन्छ त यतिबेला ?
कुरा समयको हो । अवस्था र परिस्थितिको हो । गाली गरौंला नि उनको उपचारपछि निको अवस्थामा । उनका बारेमा मनमा लागेका कुरा राखौंला नि । उखाने टुक्के भन्ने बेला थियो होला कुनै दिन । हो उनले ग्यासका पाइप चुलोमा ल्याउँछु भनेकै हुन् । आधुनिक रेल देशमा ल्याउँछु भनेको सत्य हो । पानी जहाज ल्याउँछु देशमा भन्नु कुनै अपराध हो र ?
योजना बनाउन नसक्नेले के कार्यान्वयन गर्ने त उसो भए ? सपना देख्नु पर्छ र सपना देखेर सुत्नु हुँदैन । बरु सपनाले निद्रा लाग्न नदिओस् । उनै हरदम सपना देख्ने प्रम हुन् ओली । उनका सपना पूरा गर्ने उनको सरकारको मुख्य जिम्मेवारी पनि हो ।कर बढाएको,निर्मला बलात्काकर काण्ड,सुन काण्ड,देशको सीमाना मिचिएको कुरा नागरिकले उठाउँछन् र उठाउनु पनि अनुचित हुँदै होइन तर समय र सन्दर्भ मिल्यो कि नाइँ उठाउका लागि ? मेरो विचार र तर्क यहीनेर छ ।
भारी मतले उनलाई नै प्रम बनाएका हुन् । उनी एक्कासी कसैको हुकुम र टीकाटालो गरी बनेका प्रम हुँदै होइनन् ।
बेलामा तोकिएको काम गर्दैछन् । सरकारमा गएका बेला शरीरले सक्दो काम गरेकै छन् तर फेसबुकमा आरोप प्रमको कुर्ची युवालाई छाड्दिन परो भन्ने छ । मैले युवा नेताहरुलाई देखि रहेको छु तर उनीहरु किन संसदभित्र र पार्टीभित्र प्रम मलाई बनाउ भन्न सक्दैनन् र आज उनी बिरामी भएको बेला मौका छोपेर प्रमको कुर्ची मागि रहेका छन् ?
भनिन्छ –ओरालो लागेको बेला मृगको पाठोलाई बाच्छोले नै खेद्छ तर यो उखान यतिबेला लायक छ ? उनी दुईतिहाइको सरकारको बलिया प्रम हुन् । पार्टीमा बलिया छन् । सहयोगीहरु पनि तगडा छन् उनका । तर गाली,श्राप र श्रञ्द्धाञ्जली किन दिई रहेका छन् जिउँदै उनलाई ?
यो देशमा सरकार छ ? के यसरी दिनदहाडै जिउँदो प्रमलाई श्रञ्द्धाञ्जली दिने मनुवालाई कुनै कार्वाही हुन्छ ? फेसबुकको वाल आफ्नै सम्पत्ति ठानेर जे पायो त्यहि लेख्ने मुनवालाई कुनै सजायँ हुन्छ ?
सरकारको कुरा होइन संस्कार र सभ्यताको कुरा हो । सत्ताको कुरा होइन सत्य र सम्झदारीको कुरा हो ।
हामी मान्छे हौं । एक आपसमा मानवीयता जरुरी हुन्छ । मानवीय संवेदनशीलता हाम्रो मुख्य कुरा हो । प्रम ओलीको कुरा मात्र होइन जोसुकै हुन् सक्लान् उनका बारेमा सकारात्मक सन्देश दिउँ,स्वास्थ्य लाभको कुरा गरौं । दीर्घायूको कामना गरौं ।
हामीले एक आपसमा यस्तै विचारको आदान प्रदान गरौं । जो सधैं सम्झन लायक रहोस् ।